Lionel Messi oo si rasmi ah ugu biiray Kooxda PSG. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Lionel Messi oo si rasmi ah ugu biiray Kooxda PSG.
Lionel Messi oo si rasmi ah ugu biiray Kooxda PSG.
Xiddiga Lionel Messi ayaa ogolaaday in uu ku biiro kooxda PSG kadib markii uu ka tagay kooxda Barcelona 21 sano oo uu joogay kooxda ku ciyaarta Camp Nou.
Todobaadkii hore ayay aayd markii ay Barcelona ka yaabsatay adduunka kadib markii ay xaqiijisay in uu Lionel Messi isaga tagi doono kooxda Kadib markii uu heshiiskiisu dhacay.
Xiddiga Lionel Messi ayaa gebi ahaanba shalay macsalaameeyay Kooxdiisii hore ee Barcelona, waxaana tallaabadaas aad uga xumaaday inta badan taagaareyaasha uu xiddga ku leeyahay Kubadda Cagta.
Barcelona ayaa khamiistii xaqiijisay in wakhtigii Lionel Messi ee Barcelona soo dhamaaday iyada oo uu xiddigu isaga tagi doono kooxda kadib markii ay koxdu ku fashilantay in ay heshiis cusub ka saxiixato xiddiga.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka Heer Federaal oo war ka soo saaray qoondada Haweenka
Next articleCiidamo la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb